पूरा दुई तिहाइ - परिहास - नेपाल
पूरा दुई तिहाइ
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अक्सर भन्ने कुरा त्यही हो- यो सरकारसँग दुई तिहाइ छ । वास्तवमा सरकार दुई तिहाइवाला नै हो । सरकारसँग दुई तिहाइ भएको कुरा कसैले बिर्सनु हुँदैन । जनताले बिर्सेलान् कि भन्ने चिन्ता प्रधानमन्त्रीलाई छ क्यारे ! त्यसैले उहाँ पटक-पटक जनतालाई जानकारी होस् भनेर पनि दोहोराउनु हुन्छ, सरकारसँग दुई तिहाइ छ ।
वास्तवमा दुई तिहाइ नै यो सरकारको प्रमुख तत्त्व हो । सरकारसँग विचार नहोला, सिद्धान्त नहोला, आचरण नहोला । तर नभए पनि के भो, दुई तिहाइ त छ नि । दुई तिहाइ भएपछि अरु किन चाहियो ? (कृपया यसलाई 'हुलास भएपछि अरु किन चाहियो ?' वाला विज्ञापनसँग तुलना नगर्नुहोला ।)
केही पूर्वाग्रही के पनि भन्छन् भन्दा सरकारसँग दुई तिहाइ भए पनि के भो र, कामचाहिँ केही गरेको होइन ।
वास्तवमा सरकारले अहिले कुनै काम नगर्नु नै ऊसँग दुई तिहाइ हुनुको पूर्ण प्रमाण हो । अहिले सरकार आफूसँग भएको दुई तिहाइ शक्तिलाई 'कुनै काम नगर्ने' कार्यमा प्रयोग गरिरहेको छ । अर्थात्, सरकार अहिले आफ्नो पूरा दुई तिहाइ शक्ति लगाएर काम नगरिरहेको अवस्था हो । शक्ति भनेको काम गर्न मात्र होइन, काम नगर्न पनि आवश्यक हुन्छ । सरकारको दुई तिहाइ शक्ति अहिले यही काम नगर्नमा प्रयोग भइरहेको छ । जब पूरा दुई तिहाइको काम नगर्ने कुनै काम हुन्छ भने त्यहाँ कसैले कुनै काम गर्न सक्दैन ।